MASHRUUCA GARGAARKA wax barashada ayey ka faa’idaysteen dugsiga DHAYNTA waxaan maalgalinaya hay’adda UNICEF oo kaashanaysa ururka YOVENCO | Biyoguurenews.com
Home Wararka MASHRUUCA GARGAARKA wax barashada ayey ka faa’idaysteen dugsiga DHAYNTA waxaan maalgalinaya hay’adda...
MASHRUUCA GARGAARKA wax barashada ayey ka faa’idaysteen dugsiga DHAYNTA waxaan maalgalinaya hay’adda UNICEF oo kaashanaysa ururka YOVENCO
Roob yaraan ayaa ka muuqanaysaay gobolada qaar ee Somaliland taas oo caruurta ay wajihayaan xaalad khadarodabadheeraday oo ay sababeen dagaalada abaaraha iyo dagaalada iyo barakacu taas oou bahan kaalmo biniaadantimo. Si gaara ah, 7,895 iyo 13, 875 arday oo ku jiray dugsiyada marka la eego xogtii hore unicef iyo mashruucdii ilhama wax bar ( AEC) 2017 EIE ee isku xigay ayaa looga baahan yahay gargaar si ay u sii wataan wax barashadooda waliba meesha u dhow ay ka heli karaan dugsi waxbarasho ama in loo sameeyo meelo ku meel gaadha ah, meel ay saamayntu gaadhay ee aanay jirin adeeg waxbarasho.
Waxa fulinaya mashruucan Hay’adda wadaniga ah ee YOVENCO waxaana maalgalinaya Hay’adda qaramada middobay ee caruurta UNICEF, waxaana laga fulinayaa Gobolladda Saaxil, Togdheer iyo waliba Maroodijeex agar ahaan, 36 dugsi oo kal duwan ayuu si toos ah u caawinayaa in sha allah.
Guud ahaan, bulshada ay dhibaadatu soo gaadhay waxay ahaayeen xoolo dhaqatada iyo bulshada reer miiga ah iyadadoo waxbarashada dawladda iyo ku gaarka loo leeyahayba noqdeen qaar adeegoodu hooseeyo marka laga eego dhinaca bixinta adeega waxbarasha.
Si loo xaliyo dhibkaas aan soo sheegnay, UNICEF waxay qorshaysay inay sii wado gargaarka waxbarashada ee sadex iyo sodan kun iyo shan boqol iyo sideetan iyo shan( 33,585) arday kuwaas oo ahaa qaar ay hore UNICEF u taageeray 2017 mashruucii EIE (Education In Emergency ) wax barashada degdega ah isla markaana lagu soo kordhiyey lix kun afar boqol iyo sideetan arday oo dhigta 36 dugsi oo ay saamaysay xaalada degdega ah ee aynu soo sheegnnay kuwaas oo u baahan jawaab degdega ah oo baniadanimo.
Mashruucu wuxuu gaargaari doonaa 6,480 arday ee goobaha ay sameeyeen dhacdooyinkaasi aan soo sheegn, mashruuca waxa uu fursad siinayaa inay dugsugiga la qoro laguna soo celiyo 6,482 (2,916 hablo ah) oo arday oo ay UNICEF gargaartay intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2018 iyo mashruuca EIE gargaarka degdega ah 2017 ee 36 saamaayntu gaadhay ee ka tirsan Gobolada SAAXIL ,MARAOODI JEEX iyo TOGDHEER.
Mashruucani wuxuu siin doonaa deeq lacag ah oo loogu talo galay dugsiyadda si loogu daboolo baahiyaha dugsiyadda oo ku jiraan biyaha, naadafada iyo fayodhawr ee wiilasha iyo hablaha ee 6480 arday ee mashruucu caawinayo , tababaro lasiin doono gudiyadda waxbarashada oo la xidhiidha maaraynta dugsiyada, wacyi galinta bulshada, dhaqaale ururinta bulshada ,ka qaybqaadashada iyo u doodida dahana dugsiga.
Hadaba dugsi DHEENTA oo ku yaalla tuulada DHAYNTA ee Gobolka MAROODI-JEEX kana mid 36 dugsi ee mashruuca ka faaidayna waxa uu 40 km dhanaca bari ka xiga caasimad hargaisa ayaa waxa Gudida waxbarashadu ee dugsigu iyagoo ka faaiidaysanaya deeqda lacageed ay sameeyeen dayactir balaadhan oo kala ah hagaajinta fasalada, nuuradayn iyo istambarida fasalada, hagaajinta sagxada iyo berendaha fasalada qaarkood. Sidoo kale waxa caruurta loo agaasimay goob cuntada loogu sameeyo oo ku meelgaadh ah, sidoo kale waxaa loo soo iibiyey maacuuntii ama weelka cuntada oo dhamaystiran waxaa loo sameeyaa nususaacaha yar oo kooban iyo waliba hal wakhti oo qado ah, taas oo ka saaciday inay si fiican oo bilaa werwera ah u dhigtaan dugsi isla markaana ay ku noqdaan guryahoodii iyago faraxsan. Taasi waxay kordhisay tirada ardayda dugsiga waxaana mashruucu uu ka caawiyay Qaybta ugu gunnada laba macalin oo u dhiagaya tirada ardayda soo korodhay ee dugsigga timi sanadkan iyo sidoo kle waxaa la tobabaray gudida waxbarashada isla markaa waxa la qabtay dhamaan wacyigalinta qaybaha bulshada ee bulshada DHAYNTA iyo agagaarkeeda.
Previous articleUK Oo Ku Biirtay Dawlado Doonaya Inay Saldhig Millatari Ka Furtaan Somaliland
Next articleXoghayaha Difaaca Ingiriiska Oo Laba Qoraal Oo Kala Duwan Kaga Hadlay Kulankii Uu La Yeeshay Madaxweyne Biixi Iyo Faraqa U Dhexeeya Labada Qormo